Vaovao - Inona no mila jerenao rehefa mividy fefy tadim-bolo?
Ny fefy tariby misy valisoa dia vokatra fiarovana azo antoka ampiasaina manokana manodidina ny seranam-piaramanidina. Ny fefy tariby misy barany dia vita amin'ny tariby vy ambany karbaona avo lenta na tariby alimika manezioma aliminioma amin'ny fantsom-bozaka. Ny tombony azo amin'ny fefy tariby misy bararata dia rafitra ankapobeny tsotra, fametrahana mora ary fitaterana mety. Ny firafitry ny fefy tariby misy bararata dia mety kokoa hampiasaina amin'ireo faritra be tendrombohitra sy toerana misy tehezan-tendrombohitra maro kokoa. Ny fefy tariby misy bara dia raisin'olona marobe noho ny vidiny antonony sy ny fahombiazany. Ity mpampanonta manaraka ity dia hampahafantatra ny fomba hividianana seranam-piaramanidina Seine! Rehefa mividy fefy tariby misy lelany dia tokony handinika antsipirihany sasany ny mpampiasa. Ny mpamoaka lahatsoratra dia nandamina olana maromaro izay matetika mitranga rehefa mividy fiarovana amin'ny tadim-borona. Andao jerena!
Azafady mba diniho ireto teboka manaraka ireto rehefa mividy arofanina tadim-bolo:
1. Fehin'ny vatan'ny mpiambina tadin'ny tsipika. Ny haben'ny takelaka dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny kalitao sy ny vidin'ny fefy tariby barbara. Noho izany, rehefa mividy fefy tariby misy barany, ny haben'ny habeny no olana voalohany hosedraina. Na izany aza, raha tsy manam-bola ny sefo, dia aza raharahanao be loatra izany.
2. Diamère tariby vy an'ny mpiambina tadin'ny barbara. Ny savaivon'ny fefy tariby misy barika dia mifandraika amin'ny habetsaky ny fitaovana ampiasaina. Izy io koa dia masontsivana iray manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny kalitao sy ny vidin'ny fefy. Ampirisihina hampiasa fitaovana handrefesana ny savaivony. Afaka mampiasa caliper vernier ianao. Raha tsy izany dia mividiana iray. Rehefa dinihina tokoa, yuan am-polony fotsiny ny vidiny.
3. refy fitaovana hafa. Ny kalitaon'ny fefy fefy tariby volo koa dia ampahany manan-danja amin'ny fefy iray manontolo, izay hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny fefy tariby varahina. Noho izany, amin'ny fotoana fividianana, ny halavany, ny sakany ary ny hatevin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fefy tariby misy lelany dia tsy maintsy hosedraina, indrindra ny fandrefesana ny hateviny, izay singa lehibe manimba ny kalitaon'ny fefy tariby loaka.
4. Kalitaon'ny firakotra ambonin'ny. Amin'ny ankapobeny, ny fefy seranam-piaramanidina dia mila fitsaboana ambonin'ny tany mba hisorohana ny fahasimbana sy hanitatra ny androm-piainan'ny fefy seranam-piaramanidina. Ny firakotra mahazatra ho an'ny mpiambina tariby misy bararata dia misy ny fandraronana, ny famafazana, ny fantson-drano ary ny fantson-drano mafana. Na dia mety tsy fantatrao aza io fahalalana io dia tokony hahafantatra bebe kokoa momba ny saina mahazatra ianao.
5. Ampahafantaro ary safidio ny karazana mpiambina. Ny fiambenana dia azo zaraina amin'ny karazany samy hafa arakaraka ny tanjona. Ny karazana mpiambina sahaza azy dia azo safidiana arakaraka ny toerana hampiasana azy, ary ny mpiambina isan-karazany dia samy manana ny vidiny. Ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia mbola lehibe, ka mila misafidy araka ny karazany ilaintsika isika.